“Xirfadyahan ahaan waa mid ka mid maalmihii iigu fiicnaa” Zidane | Gaaroodi News
Waa horyaalkii labaad ee Laliga ee uu qaado Zidane
“Kaddib 38 ciyaarood, waxaannu haysannaa dhibco ka badan qof kasta. Kaddib bandawgii iyo wax kasta oo dhacay. Tani waa arrin farxad leh” ayuu ku sii daray hadalkiisa. Real Madrid, ayaa horyaalkani uga dhigan yahay koodii 34aad, iyagoo ka sarreeya siddeed horyaal kooxda Barcelona.
Gabagabadii, guuldarradii Barcelona ee Osasuna gaadhsiisay ayaa guushan ka dhigtay mid yar oo raaxo badan. Karim Benzema ayaa dhaliyey goolashiisii 20 iyo 21 ee intii uu horyaalku socday